Malalaka izao ny mpandeha tonga any Ouganda rehefa avy nanao fitiliana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Malalaka izao ny mpandeha tonga any Ouganda rehefa avy nanao fitiliana
Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda
Ogandà tonga mpandeha
Taorian'ny faneren'ny mpandeha sy ny fanararaotana media sosialy, dia voatery nitelina pie manetry tena ny Minisiteran'ny Fahasalamana Ogandà ary niankohoka tamin'ny fanerena avy amin'ny mpandraharaha mpitety faritany sy ny vahoaka mpitety faritany ary namela ireo mpandeha tonga handeha ho any amin'ny toerana halehany aorian'ny fitiliana PCR COVID-19. fahatongavana.
Izany dia taorian'ny toromarika voalohany tsy maintsy nitaky ny mpandeha hiandry ny valiny amin'ny fahatongavany ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Mpizaha tany maro no nizara ny sarin'ny fahoriana nianjady tamin'izy ireo tao amin'ny WhatsApp, twitter, facebook, ary sehatra media sosialy hafa rehefa niandry ora maro tao amin'ny seranam-piaramanidina.
Mahamenatra ho an'ny indostria iray miady mafy amin'ny fanarenana taorian'ny efa ho 2 taona.
Mba hamonjena tarehy, fanindroany tao anatin'ny herinandro latsaka, dia nisy toromarika nivoaka tamin'ny anaran'ny Governemanta Ogandà. Ity faharoa ity, voatondro ho fepetra ara-pahasalamana S23/21 COVID-19 ho an'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Entebbe avy amin'ny Biraon'ny Fampahalalam-baovao Aeronautika Sivily ao Entebbe, dia nisolo toerana. ny toromarika teo aloha SUP 22/21. Mihatra anio 5 Novambra io fanovana io.
Ny torolàlana vaovao dia milaza hoe:
1. Ny mpandeha rehetra tonga ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Entebbe, na inona na inona firenena niaviany na toerana fanaovana vaksiny, dia hanao fitiliana tsy maintsy atao amin'ny COVID-19.
2. Ho fanamorana, ny mpandeha rehetra tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe dia haka ny santionany momba ny COVID-19 ary avela handeha any an-tranony na any amin'ny hotely hitokana-tena mandra-pahazoany ny valiny.
3. Ny valim-panadinana dia halefa any amin'ny findainy/mailakany.
4. Ny fanavakavahana ihany dia:
5. Ny mpandeha izay manao fitiliana tsara dia ho arahin'ny ekipan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana.
6. Ny fitsaboana ny mpandeha ao amin'ny (5) etsy ambony dia hanaraka ny torolàlana momba ny fitsaboana COVID-19 avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana.
7. Raha misy mpandeha ka hita eo am-pahatongavana fa misy soritr'aretina mitondra ny tsimok'aretina COVID-19, dia hatoka-monina izy ary entina any amin'ny tobim-pitsaboana.
8. Mba hanamora ny fanamorana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe, ny mpandeha rehetra miditra dia tsy maintsy:
- mameno endrika Fanaraha-maso ara-pahasalamana an-tserasera 24 ora alohan'ny hahatongavana.
- mandoa $30 amin'ny Internet 24 ora alohan'ny hahatongavana.
9. Ny mpandeha rehetra tonga dia tsy maintsy manolotra amin'ny Seranam-piaramanidina Port Health, taratasy fanamarinana fitiliana PCR ratsy COVID-19 ho an'ny fitiliana natao tao anatin'ny 72 ora manomboka amin'ny fotoana fanangonana santionany.
10. Ny mpandeha rehetra miainga dia tsy maintsy manolotra any amin'ny seranam-piaramanidina Port Health, taratasy fanamarinana PCR ratsy COVID-19 ho an'ny fitiliana natao tao anatin'ny 72 ora manomboka amin'ny fotoana fanangonana santionany ka hatramin'ny fidirana. Hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny firenena halehany izy ireo.
11. Ireo mpandeha tonga amin'ny fotoanan'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, sy/na avy any amin'ny distrika any an-dafin'i Kampala miaraka amin'ny tapakila fiaramanidina manan-kery sy tapakila fidirana, dia avela handeha any amin'ny hotely sy/na trano fonenany.
12. Ireo mpandeha miainga amin'ny fotoanan'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, sy/na avy any amin'ny distrika any an-dafin'i Kampala miaraka amin'ny tapakila fiaramanidina manan-kery, dia avela handeha any amin'ny seranam-piaramanidina halefany amin'ny fanolorana ny tapakilan'ny mpandeha amin'ny manampahefana ho porofon'ny fandehanana any amin'ny seranam-piaramanidina.
13. Ny mpamily dia tokony hanana porofo fa avy amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo (toy ny tapakila fiantsonan'ny seranam-piaramanidina na tapakila mpandeha) mba hampidina na haka mpandeha.
14. Ny fitaterana an-habakabaka ny taolam-paty ho any an-tanindrazana dia azo atao raha tanteraka ireto fepetra manaraka ireto:
- Kopia ny pasipaoro/taratasy famantarana ny maty. (Ny pasipaoro/taratasy fitsangatsanganana/taratasy famantarana voalohany tokony hatolotra ny manampahefana misahana ny fifindra-monina).
– Fahazoan-dalana manafatra/manafatra avy amin’ny Tale Jeneralin’ny Sampan-draharaham-pahasalamana.
- Ny antontan-taratasy dia hohamarinin'ny fahasalaman'ny seranan-tsambo, ary ny vatam-paty rehefa tonga dia ho voadio amin'ny fahasalaman'ny seranan-tsambo.
15. Mba hitondrana taolam-paty eto amin'ny firenena dia TSY MAINTSY mahazo alalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny raharaham-bahiny.
ETurboNews Nohamafisin'ny mpahay siansa avy amin'ny Jeneraly, Sampan-draharahan'ny Fahasalamana, ary ny Minisiteran'ny Fahasalamana notarihin'ny Tale Dr. Henry G. Mwebesa izao ny toromarika ho an'ny Manampahefana Sivily (CAA).
Nisalasala ireo mpandraharaha amin'ny fizahantany momba ny tsy firaharahian'ny minisiteran'ny Fahasalamana amin'ny fitiliana tsy maintsy atao amin'ny fahatongavana, ary ny ministera dia nanizingizina fa hampitsahatra ny fiparitahan'ny covid-19.
Ny ampitson'ny toromarika teo aloha tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 27 Oktobra natao tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe, dia tapa-kevitra ny hanohy ny fizotry ny fitiliana voalohany ny minisitry ny fahasalamana, Jane Ruth Achieng, na dia teo aza ny fanamby natrehiny nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, toy ny mikrô tsy mahomby, orana mivatravatra, ary feno olona, ​​raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy.
Ny tsy fahafaham-po amin'ny tsy maintsy miandry aorian'ny fitsapana, dia nahasarika ny sain'ireo mpanao lalàna ao amin'ny Komitin'ny Parlemanta momba ny fizahantany izay nampiantso tompon'andraikitra avy amin'ny sehatry ny fizahantany mba hanatevin-daharana ny Minisiteran'ny Fahasalamana (MOH), Oganda Civil Aviation Authority (UCAA), ary ireo mpandray anjara hafa mandray anjara amin'ny fampiharana ny fitiliana tsy maintsy atao amin'ny fahatongavana, hifaneraserana amin'ny komity parlemantera momba ny fahasalamana notarihin'ny filoha lefitra, Hon. Ssebikaali Yoweri, tamin'ny 4 Novambra 2021, taorian'izay dia nijery ireo tranobe tao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe izy ireo.
Ny solontenan'ny sehatry ny fizahantany dia Amos Wekesa ao amin'ny Great Lakes Safaris sy Civy Tumisima, filohan'ny Association of Uganda Tour Operators (AUTO). Notaterin'i Wekesa ny fanafoanana ny mpanjifa tsy te-hanao fitiliana sy fahatarana tsy ilaina raha i Tumusime kosa nanao fiangaviana ho an'ireo mpizahatany efa vita vaksiny manana fitiliana PCR ratsy (Polymerase Chain Reaction) 72 ora alohan'ny hahatongavana ho avela handeha any amin'ny toerana halehany nefa tsy mila manao fitiliana rehefa tonga.
Ho fanamaivanana azy ireo sy ho fanamaivanana ny indostrian'ny fizahantany amin'ny ankapobeny, Achieng sy ny minisiteran'ny Fahasalamana dia niondrika tamin'ny fanerena.
Nifanohitra ny fifandraisan’ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ireo mpandraharaha amin’ny fizahantany hatramin’ny nametrahan’ny sampana mpitsikilo ny anton’ny fanaovana fitiliana sy fanomezan-dalana ho an’ireo fitiliana ireo raha eny amin’ny seranam-piaramanidina ihany fa tsy any amin’ny toerana fidirana hafa. Niampanga ny sehatry ny fahasalamana ho nanao tombom-barotra tamin’ny fandaniana ny sehatry ny fizahantany ireo mpandraharaha amin’ny fizahantany. Ny sehatry ny fahasalamana indray dia nanao tsinontsinona ireo mpandraharaha mpizaha tany, nandroaka azy ireo noho ny fanelingelenana ny asany.
Tamin'ny resadresaka tamin'ny fahitalavitra tao amin'ny NTV izay nanaraka ny toromarika, Vianney Lugya, talen'ny raharaham-bahoaka UCAA, dia niaiky fa nanaiky ny fanerena mitohy. Hoy izy: “Tamin'ny misasak'alina, hatramin'ny nanombohantsika nampihatra an'io fanapahan-kevitra io, dia avela handeha ny mpandeha rehetra aorian'ny fakana ny santionany, ary nandalo ny fomban'ny fifindra-monina sy ny fahatongavany izy ireo. Nanomboka tamin'ny Ethiopian Airlines izahay taorian'ny misasakalina; nisy Rwandair tonga koa izahay ary ny Egypt Air. Anio maraina, manantena ny Uganda Airlines, Kenya Airways, ary ny sidina maro hafa, ary fanamaivanana lehibe ho an'ny seranam-piaramanidina sy ny rafi-pitaterana an'habakabaka izany.”
Mikasika ny ahiahy momba ny traceability, dia nilaza izy fa ny mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny seranam-piaramanidina dia nanao fitiliana mpandeha 11,449 ary tamin'ireo 43 ihany no niatrika fitsapana.
“Rehefa mijery ny sary lehibe kokoa amin'ny zava-nitranga ianao dia tonga ny mpandeha, alaina santionany, ary ... miandry ny valiny mandritra ny 2 1/2 ora eo ho eo. Raiso ohatra ny olona iray nitsoaka avy any Etazonia – dia efa ho 20 ora, anisan'izany ny fitaterana. Izay no niavian’ny fitarainana sasany. Ka izay efa reraka, dia iharan'ny fiandrasana. Maromaro ny mpandray anjara voarohirohy amin’ity raharaha ity. Miara-miasa akaiky amin'ny fiarovana, ny banky, ny NITA (National Information Technology Authority) sy ny hafa izahay.
“Efa nandinika ny zava-misy izahay, ary tena nanome izany torohevitra izany izahay. Afaka manome anao ny ohatra momba an'i Dubai aho izay avelanao handeha any amin'ny hotely rehefa avy naka santionany. Nandeha tany aho herinandro vitsivitsy lasa izay, ary raha vao tonga tany amin'ny hotely aho dia nahazo ny valiny.
“Nahazo valiny izahay satria nitaraina ny mpandeha noho ny tsy maintsy niandry, ary nanakivy ny mpandeha sasany tsy handeha izany. Famantarana ny fanatsarana hatramin'ny niantombohan'ny toromarika dia nanatri-maso ny fizotry ny fizotry ny fizahan-tany sasany, tsy nitonona anarana, nitatitra ny mpanjifany naharitra 20 minitra latsaka kely mba hanazavana ny fomba fiasa ary hizotra.
Entanina ny mpizaha tany mamandrika an-tserasera ho an'ny fitsapana laharam-pahamehana eto.